Koonfurta Suudaan -
Waxa Katangese gooni u goosadka ah aysan aqoonin: Juun 30, 1960, Beljamka Kongo (oo maanta ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo) waxay xornimada qaadatay, laakiin 11 maalmood kadib, taasi waa in la dhaho July 11, 1960 , gobolka qaniga ah ee Katanga, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay madaxbanaanidiisa hoosta Moïse Tshombe iyada oo ay la socoto barakeysan ee Belgium, oo markiiba aqoonsaday Jamhuuriyadda cusub ee Katanga
Posted By: KongoLisolowaa: May 11, 2020 00: 00 No Comments
Tan iyo markaas, reer Katangese waligood ma joojin kobcinta isbeddelada madax-bannaanida. Madaxbanaanida Katanga ee Kongo waa wadnaha dhamaan sheegashada Katangese ... Akhri wax dheeraad ah
Dhammaan dhinacyada nolosha dhaqameed ee “Madow” Afrika waxay tixraacdaa Masar waana bilowga bilowga ah ee ka hor istaagaya aragtidaas
Posted By: KongoLisolowaa: Abriil 30, 2020 12: 44 No Comments
Laakiin, Suudaan waxay leedahay Pyramid ka badan Masar - runta dadka Madow / Afrikaanka waxay bilaabaysaa inay ka soo baxdo godkii ay Reer Galbeedka ku aaseen. C ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 28, 2019 00: 00 No Comments
Ka dib ugaarsiga reer Falastiin, Israa’iil waxay weerartaa dadka madow / Afrikaanka. Waxaa lagu magacaabaa "kuwa xadgudbay". Xerada Ketziot ee lamadegaanka waxaa ku jira qaxootiga 11 000. Darbiga nabadgelyada ... Akhri wax dheeraad ah
Boqorka Bartare 284 ee 275 ka hor taariikhdeenna, oo ah geedkii Firxadkii Kush waa magaca Masriyiintii ... Akhri wax dheeraad ah
Muhammed Ali Sa'id: Addoonkii hore ee Borno oo ku biiray Midowga Yurub intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye. "Sidee uu addoonkii hore ee Borno uga noqday midowga Soomaliya intii lagu jiray dagaalkii sokeeye? "
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 8, 2019 00: 00 No Comments
Qoraaga Midawga ee sawirkaan 1863 waa Nicholas Sa'id. Hase yeeshee, marwalba ma uusan sheegin sidaas. Magaciisa ugu horeeyay waa Muhammed Ali Sa'id oo uu ku dhashay ... Akhri wax dheeraad ah
Bol waxa uu yimid NBA 1985, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Sudan u ciyaaro. Wuxuu ciyaaraa sanado 10, isagoo xiran maaliyada afar kooxood oo kala duwan, oo ay ku jiraan 76ers of Philadelphia iyo ... Akhri wax dheeraad ah